Friday, 25 March 2016 07:27
Aniga muslin baan ahay
* Waxaan rumaynsanahay Ebbe keligii, mana laha qof wax la wadaago, Rabbi isaga aan ahaynna ma jiro, ma dhalin la mana dhalin, wax isaga la mid ahna ma jiro.
* Waa kan abauuray samadaha iyo dhulka isagaana iska leh, waa kan og waxa maqan iyo waxa loo jeedo, wuu nool yahay mana dhinto, wuu taagan yahay mana hurdo.
* Waxaa u sugan magacyada suuban iyo sifooyinka sarreeya, waxaa ka mid ah sagaal iyo sagaashan magac, ruuxii kooba oo Alle ku baryana jannada buu galayaa.
* Waxaa ka mid ah sifooyinka kelinimada : isaga waa mid oo keli ah, oo aan cid u baahnayn, waa kan iska leh mulkiga.
* Iyo sifooyinka jalaalka: isaga waa mid xikmad badan oo gun og ah, hanuuniye ah, xaq ah, midka ugu horreeyay ah, kan ugu dambeeyay ah, kan muuqda ah, midka qarsoon ah, midka dhaxla wax walba ah, kan jiraya waligii ah, hodon ah, xumi ka nasahan, wax walba markhaati ka ah, dhow, xukunka soo saara, garsoore ah, nuurka cirarka iyo dhulka ah, weynida iyo karaamada iska leh.
* Sifooyinka weynida : isaga waa kan cisada leh, oo weyn oo weynaynta mudan oo kibir badan, oo xoog leh, oo adag, oo ka adag wax walba, awood leh, gargaare ah, sarreeya
* Iyo sifooyinka awoodda : isaga waa kan wax walba og, wax walba maqla, wax walba arka, waa kan nool, waa kan wax celiya, waa kan fidiya. waa kan hoos u dhiga, waa midka kor u qaada, waa kan wax ciseeya, waa kan wax dulleeya, waa kan wax bixiya, waa kan wax reeba, waa kan waxtara, waa kan dhibka keena, waa kan wax nooleeya, waa kan wax dila, waa kan wax hormariya, waa kan wax dib u dhiga.
* Sifooyinka abuurista : isaga waa midka abuura, oo alkuma, oo sawira, oo wax haysta, oo wax amaamuda, oo bilaaba, oo soo celiya, oo soo saara, oo isu keena, oo hibeeya, oo fura, oo arsaaqa, oo hodon ka dhiga, oo kooba, oo kormeera, oo ilaaliya, oo koontaroola, oo ah midka amaamuday samadaha iyo dhulka
* Sifooyinka naxariista : Alle waa midka naxariista guudka iyo tan gaarba leh, waa midka turidda badan oo galladda badan oo kalgacalka badan, oo samafalka badan oo denbi dhaafka badan, cafiska badan, towbadda aqbala, nabadgelyada ku sifaysan, mu’minka ah, shugriga ku sifaysan, deeqsi ah, nimceeya, deeq bixin badan, gargaare ah, ajiiba, oo waasac ah sabar badan, hanuuniye ah, dulqaad badan, dhimrin badan, la talasaarto, badbaadiye ah, oo la kaalmaysto, towbaddana aqbala.
* Wuxuu ku galladaystay insaanka nimcooyin aan la soo koobi karin, nimco kasta addoonka ku raaxaysto Alle keligii agtiisa ayay ka timid , isagaa abuuray oo nooleeyay, wuxuuna u yeelay arag iyo maqal, wuu karaameeyay, kaddib ayuu arsaaqay oo wanaagna u sameeyay.
* Sidaa daraaddeed waxaa ku waajibay addoonka inuu Alle cibaadada ku gooni yeelo – waa in amarkiisa la qaataa wixii uu reebayna laga fogaadaa - qof aan Alle ahayn cibaado ma muto.
* Waa sidaas, Alle wuxuu ogyahay xaaladaha addoonka oo dhan, dhaacada iyo macsiyaba, addoonka waxaa laga rabaa in qalbigiisa cabsi Alle la buuxsamo iyo weynayn iyo jacayl, oo uu ka xishoodo macsiyadiisa oo markaa ka istaago, waayo Alle waa u jeedaa marka uu samaynayo.
* Wuxuu siraysanayaa camalkiisa suuban oo Allehiisa abuuray u dhoweynaya, markaas ayuu kordhisanayaa ilaa uu ka gaaro darajada ixsaanka, maxaayeelay iimaanku wuxuu ku kordhaa dhaacada wuxuuna ku naaqusaa macsiyada.
* Sidaas oo kale Alle waa mid u naxariista insaanka naxariis ka badan midda hooyada ay u naxariisato ilmaheeda, naxariistiisana waxay deeqday wax kasta, addoonka waxaa laga rabaa inuu Alle wax weyddiisto oo uu u taddaruco, xagga baahidiisa adduun iyo aakhiraba oo uuna weyddiinin qof kale.
* Waayo wax faa’ido ma laha in la baryo Alle qof aan ahayn, ileen awood ku filan ma haysto qof aan Alle ahayn, mana maqlo waxa qarsoon iyo faqa qof aan Alle ahayn, qadarkana qof hayo ma jiro qof aan Alle ahayn, mana ajiibi karo ducadiisa qof aan Alle ahayn.
* Sidaa awgeed uma bannaana muslinka inuu baryo qabri, ama uu weyddiisto qofka qabriga ku aasan, wax kastaba ha ahaadee qofka ku aasan, maxaayeelay wax ma maqlo, sidee buu u ajiibaa oo uu wax ugu taraa?
Alle keligiisa ayaa waxtar leh dhibna keeni kara, sidaa awgeed waxaa laga rabaa muslinka inuusan masaajid ku dhisin qubuuraha korkooda, maxaayeelay Nabiga –naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee – ayaa reebay.
* Sidoo kale addoonka waxaa laga rabaa inuu eego tabardarridiisa iyo awoodda Alle, iyo inuu eego faqrigiisa iyo hodontinnimada Alle, iyo inuu eego jahligiisa iyo cilmiga Alle , iyo liidnaantiisa iyo cisada Alle.
* Inuu ogaado in cisada Alle iska leeyahay iyo rasuulkiisa iyo mu’mimiinta.
* Waxaa la rabaa inuu ka mid ahaado mu'miniintan oo aan talasaaranaynin Alle mooyee, kaalmana ka dalbaynin Alle mooyee, magangalyana ka dalbaynin Alle mooyee, gargaarna ka dalbaynin Alle mooyee, wax kalena ka baqaynin Alle mooyee, qof kalena wax ka rajaynaynin Alle mooyee, wax kalena baryaynin Alle mooyee, qof kalena wax u gowracaynin Alle dartii mooyee, qof kalena shardi u dhigaynaynin Alle mooyee, qof kalena ku dhaaranaynin Alle mooyee, ma xirtaan xirsiyaal iyo xijaabyo, mana rumeeyaan kitaabgaablow iyo kuwa xidigaha fiiriya iyo sixrooleyaasha mana u tagaan.
* Mana baasaystaan waxyaalaha, waxayna ka digtoonyihiin qaladaadka carrabkooda si naarta aysan ugu dhicin, ma oranayaan : ( Alle wuxuu doono iyo hebel wuxuu doono) ( haddii Alle ahaan lahayn iyo adiga) (Ilaahay ayaan talasaartay iyo adiga), waayo ereyadaan waxay simayaan Alle iyo addoomahiisa waa shirki yar, balse waxay dhahayaan : ( Alle keligiisa ayaan talasaartay) (wixii Alle doono ka dib wixii hebel doono).
* Sida ay noogu waajib tahay inaan Alle rumayno waxaa waajib nagu ah inaan ku gaalowno wax kasta oo Alle sokadii la caabudo.
* Waxyaalaha Alle sokadii la caabudo waxaa ugu horreeya shaydaanka, iyo qof kasta oo Alle sokadii la caabudo isaguna raalli ka ah.
* Kuwan Alle sokadii la caabuday waxaa ka mid ah wax sharci dejiyay oo xarrimaya wixii Ilaahay banneeyay ama bannaynaya wixii Ilaahay xarrimay.
* Waxaa soo galaya qof kastoo arrinkaas ugu yeeray, ama dadka faray, ama ku xukumay, maxaayeelay waa qooqay xadka makhluuqaadka ayuu ka baxay oo ah maqalka iyo hoggaansanaanta ah.
* Alle keligiisa ayaa ah midka dadka abuuray oo og wixii iyaga hagaajinaya, qof xaq u leh ma jiro inuu sharci u dejiyo dadka.
More in this category: « Gogolxaarada buuga muslin baan ahay Rumaynta malaa'igta »